Dowlada oo ka hadashay Weerarkii ay Ciidamada Faransiiska ka fuliyeen Buulo Mareer | KEYDMEDIA ONLINE
Dowlada oo ka hadashay Weerarkii ay Ciidamada Faransiiska ka fuliyeen Buulo Mareer
Muqdisho (KON) - Kadib markii Ciidamada Kumaandooska Fransiiska ee habeen hore Weerar kusoo qaadeen Degmada Buulo Mareer ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa Golaha wasiirada dawlada federaalka Soomaaliya oo Xalay kulan gaar ah yeesheen ka hadleen Arintaasi.
Kulankaan oo ahaa Kulan Deg Deg ah ayaa markuu dhamaaday ka hadashay Raysul wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha dibadda Marwo Fawsiyo Yuusuf Xaaji.
"Aad baan uga xumnahay Weerarkaasi Ciidamada Faransiiska ay ka fuliyeen dalka Soomaaliya iyadoo aan la ogeysiin dawlada" ayey tiri Marwo Fawsiyo Yuusuf Xaaji.
“Wuxuu ahaa weerar aad iyo aad looga wada xumaadey shacbiga Soomaaliyeed meel kastuu joogo, anaguna aad ayaana uga xunahay weerarkaasi khasaaraha geystay ee ay ku dhinteen dad Soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn afduunka ninka Faransiiska ah.”
Dowlada Soomaaliya ma eysan ka hadlin tilaabada ay ka qaadi doonto Weerarkaasi, kolow Awood ay tilaabo uga qaado aysan laheyn.
Howlgalkaan oo bilowday habeen hore ayaa wuxuu ka danbeeyay ka dib markii ciidamada Faransiiska ay isku dayeen in ay soo furtaan muwaadin u dhashay wadankaasi oo ay afduub ahaan u heesteen Al-Shabaab sanado badan.